इन्स्टामा अदितिको हट विकिनी लुक्स !! फोटो फिचर - Experience Best News from Nepal
अटोपर्यटनबैँक वित्तसहकारीसेयर बजारसुनचाँदीतस्विरहरु
यस महिना चर्चामा
१मेस्सी बने शताब्दी कै उत्कृस्ट खेलाडी, रोनाल्डो दोश्रो !! हेर्नुहोस अन्तिम २० खेलाडीको सुची !!
२कोरियामा नेपाली नारीका अश्लिल भिडियो छ्यापछ्याप्ति, यसरी हालिएको छ भिडियोहरु
३रोनाल्डोको इन्स्टाग्रामको कमाई ३८ मिलियन, मेस्सीको कति ?
४मेस्सी कि रोनाल्डो ? मौरिन्होले दिए प्रतिक्रिया !!
५सपनामा आफ्नै बिहे भएको देख्नु भयो, जान्नुहोस् त्यसको फल यस्तो हुनसक्छ !!
६रोनाल्डोले किन चाडै फुटबलबाट सन्यास लिन सक्छन !!
७सनले मागे माफी साथै देखाए यति ठुलो सम्मान !!
८युभेन्ट्सका मान्डूकिच माथि कति खर्चिदै छ युनाइटेड !! पारिश्रमिक समेत घोसणा !!
इन्स्टामा अदितिको हट विकिनी लुक्स !! फोटो फिचर
प्रकाशित मिति :
अदिती वुढाथोकीलाई नेपाली चलचित्रका दर्शकले विर्सिएका छन् । २ बर्ष अगाडि रिलिज भएको चलचित्र ‘कृ’की मुख्य नायिकाले दर्शकमा आफ्नै प्रकारको प्रभाव पारिन् । तर, चलचित्रमा डेब्यू गर्दा उनीमाथि जुन खालको अपेक्षा थियो, त्यो चलचित्र रिलिज भएपछि पुरा हुन सकेन ।
यसपछि, चलचित्र बनाउने मेकरले अदितीलाई चलचित्रका लागि अफर गर्न त्यती रुची देखाएका छैनन् । अदिती पनि हतार छैन भन्दै मुम्बइमा नै मोडलिङ गरिरहेकी छिन् । तर, अदिती वुढाथोकीले चलचित्रमा काम नगरेपनि उनको इन्स्टाग्राम पोष्टले भने फ्यानको ढुकढुकी बढाउने गरेको छ ।
इन्स्टामा विभिन्न ब्रान्डका विज्ञापनहरु पोष्ट गरेर उनले राम्रै रकम आम्दानी समेत गर्ने गरेकी छिन् । तर, उनी इन्स्टामा हिटसँगै हट पनि छिन् । हालैमात्र, उनले पोष्ट गरेको स्विमिङ पूलमा रमाएपछिको तस्वीरले उनका फ्यानहरुको ढुकढुकी बढाएको छ ।
चलचित्र ‘कृ’मा साधारण गाउँकी यूवतीको भूमिकामा देखिएकी अदिती इन्स्टामा भने बोल्ड बन्ने गर्छिन् । तर, अदितीका लागि चलचित्रमा पनि काम गर्न आवश्यक छ । होइन भने, उनलाई दर्शकले इन्स्टाग्रामको तस्वीर मात्र हेरेर सधै संझन्छन् भन्ने छैन ।
‘शत्रु गते’ युट्युबमा (भिडियो सहित)
साम्राज्ञीको हट एण्ड बोल्ड फोटोसुट (तस्बिरहरु)
प्रेमी भेट्न अमेरिका पुगिन् नायिका वर्षा शिवाकोटी
रातो स्विम कस्टममा बेनिशाको हट पोज, हेर्नुहोस तस्विरहरु (फोटो फिचर ) !!
धुपौरेको उत्साहामा अनमोलको दौड !!
‘छ माया छपक्कै’को दुई दिनको कलेक्शन कति ?
अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्यामा रोनाल्डोको छलांङ्ग !! ६ गोलको जितमा रोनाल्डोको ९ औ ह्याट्रिक !!
आफ्नो पार्टनरको कपडा लगाउदा हुन्छन यी नसोचेको फाईदा !! जानी राख्नुहोस !!
मेस्सी रोनाल्डोमा विशिष्ट खेलाडीको मुद्धाको अन्त्य !! पेलेको तथ्यांकमा को उत्कृस्ट !!
यस्ता हुन्छन शास्त्रअनुसार नारीका चार चरित्र !! जान्नुहोस कसको स्वभाव कस्तो !!
प्रिमिएर लिग गोल्डेन बुट दौडमा कसको स्थान कहाँ ?
रानीको बेजोड भूमिकामा ‘मर्दानी २ ‘ !! हेर्नुहोस यस्तो बन्यो ट्रेलर
युट्युवमा हट सिन आएपछि अभिनेत्री हन्सिका भाइरल
कम्पुटर चलाउदाँ जानै पर्ने Shortcut key के के हुन् ?
अब प्रधानमन्त्रीको ओलीको उपचार अमेरिकामा
आज २०७६ कार्तिक २६ गते बुधबारको राशिफल
जेस्ट मिडियाद्वारा संचालित जेस्टखबर डटकम
Regd. No. 88016/068/069
© copyright 2016-2019 and all right reserved to Zest Khabar | Site By : SobizTrend Technology